Izindaba - Wind Turbine Gegeratoy development trend
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, umfelandawonye oholwa yisikhondlakhondla sezimboni saseJapan uHitachi uzuze amalungelo wobunikazi nokusebenza kwezikhungo zokudlulisa ugesi zephrojekthi ye-1.2GW Hornsea One, ipulazi lomoya elikhulu kunawo wonke elisebenza njengamanje elisebenza njengamanje.
Umfelandawonye, ​​obizwa ngeDiamond Transmission Partners, uzuze ithenda ebeliphethwe ngu-Ofgem, umlawuli wamandla omoya waseBrithani osebenza ngasogwini, futhi wathenga ubunikazi bezindawo zokudlulisela kumakhi wonjiniyela i-Wosch Energy, kufaka phakathi iziteshi ezi-3 zasolwandle kanye nesikhungo sokuqala samandla asebenza olwandle. Isiteshi sokunxephezela, futhi wathola ilungelo lokusebenza iminyaka engama-25.
Ipulazi lomoya laseHornsea One elisogwini lolwandle lisemanzini aseYorkshire, eNgilandi, linamasheya angama-50% wamasheya eWosch naseGlobal Infrastructure Partners. Sekufakiwe isamba semishini yomoya eyi-174 Siemens Gamesa 7MW.
Amathenda kanye nokudluliswa kwezikhungo zokudlulisa uhlelo oluyingqayizivele lamandla omoya asogwini olwandle e-UK. Ngokuvamile, unjiniyela wakha izindawo zokudlulisa. Ngemuva kokuthi iphrojekthi isetshenzisiwe, i-ejensi yokulawula i-Ofgem inesibopho sokuxazulula nokudlulisa amalungelo wobunikazi nokusebenza. U-Ofgem ulawula ngokuphelele yonke inqubo futhi uzoqinisekisa ukuthi lowo odlulisayo uthola imali engenayo
Izinzuzo zalesi simodeli konjiniyela yilezi:
Kulula ukulawula inqubekelaphambili yonke yephrojekthi;
Ngesikhathi sokudluliswa kwezikhungo ze-OFTO, asikho isidingo sokukhokhela izindawo zokudlulisela olwandle ezihamba ngenethiwekhi;
Thuthukisa amandla amakhulu okuxoxisana ngezivumelwano zeprojekthi;
Kepha kukhona nokubi okuthile:
Umthuthukisi uzothwala zonke izindleko zangaphambili, zokwakha nezezezimali zezikhungo ze-OFTO;
Inani lokudluliswa kwezikhungo ze-OFTO ekugcineni libuyekezwa yi-Ofgem, ngakho-ke kunengozi yokuthi ezinye izindleko (njengezimali zokuphatha iphrojekthi, njll.) Ngeke zamukelwe futhi zamukelwe.